ကျွန်ုပ်တို့သည် Mauritius ရှိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို -
● Mauritius တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
● Mauritius မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား
● Mauritius ရှိရွှေဗီဇာ
အကောင်းဆုံး Agents for Residency by Investment in Mauritius နှင့်ရှေ့နေများ Residency by Investment in Mauritius and brokers for real estate Residency programs in Mauritius work in conjunction for client`s protection.
အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Residency by investment in Mauritius
လူနေမှု 10 နှစ်ပြီးနောက်
အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရွေးချယ်စရာများ Residency by investment of Mauritius
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် by Investment Agents for Mauritius နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ Mauritius သည် provides clients and their families in Mauritius with support for citizenship by investment from Mauritius, residency by investment from Mauritius and other investment immigration opportunities, in 37 countries.
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့် Mauritius အဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ for Mauritius, affordable investment immigration solicitors for Mauritius, affordable Residency by investment consultants for Mauritius, affordable Residency by investment lawyers for Mauritius and affordable immigration consulting firm for Mauritius
နေထိုင်ခွင့် by investment services for Mauritius are not offered to Traders or distributors of arms and ammunitions from or to Mauritius.
နေထိုင်ခွင့် by investment programs for Mauritius are not offered for Technical surveillance in Mauritius or industrial espionage of investment programs in or from or to Mauritius.
နေထိုင်ခွင့် by investment consulting for Mauritius are not offered for any illegal or criminal activities in Mauritius.
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် Mauritius သည် is not for individuals dealing in Genetic material in Mauritius.
နေထိုင်ခွင့် by investment services for Mauritius Mauritius ရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး၊ မောရစ်ရှတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့ဆောင်ရွက်နေသော Mauritius အတွက်တစ် ဦး ချင်းအတွက် Mauritius ကိုထောက်ပံ့မှုမရပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Mauritius သည် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု Mauritius သည် Mauritius ရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက မောရစ်ရှ Mauritius ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် Mauritius အတွက်ရှေ့ရပျ Mauritius ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC takes reasonable precaution to precure AML documents for clients for Mauritius and their KYC but we do not accept any responsibility(s) for any rejection from authorities in Mauritius for approval of application for နေထိုင်ခွင့် by investment in Mauritius.
ပုံစံ ဗီဇာ Mauritius သည်
ယာယီနေထိုင်ခွင့် Mauritius ၌တည်၏
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ registeracompany in Mauritius or Offshore and 106 Countries (Cost of registeringacompany in Mauritius is cheaper with us.)
Mauritius သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် Mauritius အတွက်ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် Mauritius ရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် သငျသညျဖို့စီစဉ်ထားပါလျှင် Mauritius startabusiness by buying existing business in Mauritius for instant start in Mauritius.
Mauritius ရှိ HR န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ human resource company in Mauritius အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် post vacancies in Mauritius အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Mauritius အတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
Business phone systems for Mauritius along with Mauritius များအတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
Accounting, due diligence in Mauritius and အများကြီးပို.
Mauritius ရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
Mauritius အတွက် setup ကိုစီးပွားရေး
After Residency by investment to Mauritius, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း မောရစ်ရှ.
Mauritius အတွက် Web ကိုဒီဇိုင်း
Mauritius အတွက် Web ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Mauritius အတွက် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
Mauritius အတွက် App ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Mauritius အတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည် Mauritius တွင်နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုထားသည်။
Mauritius အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု Mauritius ရှိလူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှရှေ့နေများ Mauritius | Mauritius ရှိတတ်နိုင်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ Mauritius အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး Mauritius အတွက်လူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု Mauritius သည်
Mauritius ၏ CJEI တရားရုံးချုပ်
Mauritius ကုန်သွယ်ရေး Portal ကို
Observatoire က de L'industrie
http://unictr.org - (IJLS - Mauritius ၏တရားရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာလေ့လာရေးဌာန)
link ကိုမှ Mauritius ၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန မော်ရေးရှပ်တွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်